AMISOM Oo Saacado Horjoogsatay Shirka Maamul U Sameynta Lixda Gobol Ee Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Ciidamada AMISOM ay is-hor-istaag ku sameeyey odayaasha dhaqanka ee ku shiraya Magaalada Baydhabo, gaar ahaan kuwa ka qeybgelaya shir la sheegay in maamul loogu dhisayo 6 gobol oo ka mid koonfurta Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ee ku sugan xarunta ADC ee Magaalada Baydhabo ayaa Odayaasha u diiday inay gudaha ugalaan xarunta shirka, waxaana Odayaasha ay dhigeen banaanbax ku aadan in loo diiday xarunta inay galaan.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM oo amar ka heystay dowladda Soomaaliya ayaa ku wargeliyay ergooyinkii ku shirayay Xarunta ADC-da inay ka kala dareeraan, oo aysan jirin cid ku shiri karta goobta, taasoo keentay inay ka caroodaan ergooyinkii soo xaadiray xaruntaas.
Wararka aanu heleyno ayaa sheegaya in amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ahaa in la hakiyo muddo 15-maalmood shirarka iska soo horjeeda ee ka socda Baydhabo, kaasoo lagu kala dhisayo Maamulada lix gobol iyo saddex gobol.
Markii muddo ciidamadu hortaagnaayeen odayaasha ayay u ogolaadeen iney galaan xarrunta shirku ka socday, taasoo dhacday kadib markii dad careysanb debadbax sameeyeen, islamarkaana taayaro gubeen, dhagxaanna ku tureen ciidamada AMISOM.
Xarunta shirka ee ADC ayaa waxaa ku sugan Odayaasha dhaqanka iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, waxaana halkaasi kasii socda shirka maamulka loogu sameynayo lixda Gobal.
Ciidamada AMISOM ayaa gabi ahaanba isaga dhaqaaqay goobta, waxaana hada ammaanka sugaya ciidanka maamulka Degmada Baydhabo.
Shirka manta ciidamada AMISOM horjoogsadeen ayaa la sheegay in maamul loogu dhisayo gobollada kala ah: Baay, Bakool, Gedo, Shabeellaha Hoose, Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe.
Gobollada 3-da ah ee kala ah: Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo ayaa horay loogu dhisay maamulka JUBA ee Axmed Madoobe hogaamiyo, waxaana qolada shirkaan wada diidan yihiin in maamulka lagu kobo 3 gobol oo kala ah: Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Waxaa magaalada ka socda shir kale oo ka horjeeda kan 6-da gobol, kaasoo maamul loogu dhisayo Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, waana shirka dowladda Soomaaliya ogoshahay.
Somali community protests over lesbian adoption